carbon steel isikwere kunye noxande umbhobho nokupakisha umatshini evela Teneng HGF200 - China Shijiazhuang Teneng
square carbon steel & uxande umatshini umbhobho ukupakisha evela Teneng HGF200
Esifutshane Intshayelelo umatshini ukuba kusetyenziswe ze apakishe imveliso ogqityiweyo kumgca kwimveliso umbhobho le. Ngaphandle ukusebenza manual, umatshini ubaleka ngokuzenzekelayo, ukuba kuphuhlise ukusebenza yemveliso eninzi. Oku kushenxisa enkqonkqoza ingxolo, umonakalo, kunye nokhuseleko efihliweyo ingozi, yaye kuphucula umgangatho imveliso kwaye zehlisa phantsi iindleko zemveliso. Ukudibana imfuneko lwasekhaya lo matshini lomgca yemveliso umbhobho lo, siya ufunxe kwindawo enamandla izixhobo phesheya nokuphuhlisa ngayo Innova ...
Supply Amandla: 5-7 iiseti
Lo matshini isetyenziselwa ukuba kusetyenziswe ze apakishe imveliso ogqityiweyo kumgca kwimveliso umbhobho le. Ngaphandle ukusebenza manual, umatshini ubaleka ngokuzenzekelayo, ukuba kuphuhlise ukusebenza yemveliso eninzi. Oku kushenxisa enkqonkqoza ingxolo, umonakalo, kunye nokhuseleko efihliweyo ingozi, yaye kuphucula umgangatho imveliso kwaye zehlisa phantsi iindleko zemveliso.
Ukudibana imfuneko lwasekhaya lo matshini lomgca yemveliso umbhobho lo, siya ufunxe kwindawo enamandla izixhobo phesheya kwaye nayo ezintsha. Lo matshini neneempawu ubugcisa, ukuthembeka aphezulu ekhuselekileyo, isakhiwo indawo kunye nengqiqo, inkqubo oqolileyo, kunye nokugcinwa operation lula. Xa kuthelekiswa umatshini phesheya, lo zokusebenza ixabiso ratio bomashini yethu iphezulu.
Previous: ZJ1250 coil steel machine uqhoqhoqho
Semi-auto machine umbhobho nokupaka
square pipe machine nokupaka
DB127 Automatic steel ngeenxa & square umbhobho p ...
DB76 Steel Round machine kumbhobho nokupaka
Steel Umbhobho Round umatshini wokupakisha DB76
HGF200 carbon steel isikwere kunye noxande pipe ...